Ahoana ny fomba hamoronana lamina amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Te hahafantatra ny fomba fanaovana lamina na pirinty hampiharana azy ireo amin'ny vokatra tsy tambo isaina ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika ny fomba, amin'ny sary hosodoko vita amin'ny tànana, dia afaka mamorona endrika tsara tarehy azonao ampiasaina amin'ny lamba, sarina, kahie ary maro hafa.
Lamina na pirinty dia misy andiana singa miverimberina antsoina hoe rapports. Noho izany, amin'ny fiangonantsika toy izao, dia miantoka izahay fa misy fitohizan'ny lamina iray mihatra amin'ny faritra rehetra, tsy misy fatiantoka kalitao hitranga raha toa ka nihalehibe ny fanoharana.
Raha sambany tonga eto ianao dia manoro hevitra anao aho mba hamaky aloha ny lahatsoratro momba ny fomba fananganana rapport na singa iray amin'ny famerimberenana, satria izy io no ho fototry ny maodelintsika.
Vantany vao noforonintsika ity singa fototra ity (izay ho tahirintsika Zavatra Inteligent hahafahantsika manova azy io any aoriana), afaka mamorona antontan-taratasy vaovao izahay ary mandika ny fifandraisanay miverimberina amin'ny fomba rehetra tadiavintsika, ohatra amin'ny alàlan'ny fananganana kofehy. Fa eto no olana: manana elanelana eo anelanelan'ny rapports isika ary tsikaritra ny endrika grid.
1 Mameno banga eo anelanelan'ny singa miverina
1.1 Safidy A: Mamorona kopian'ny sosona sary
1.2 Safidy B: fampiasana koordinatiora
2 Fitaovam-piadiana ny lamina
3 Karazana lamina mifanaraka amin'ny endriny
Mameno banga eo anelanelan'ny singa miverina
Zava-dehibe ny fananana ny fitohizantsika, izany hoe ny banga tsy dia hita miharihary (raha tsy tiantsika io famolavolana manokana io). Ahoana no hamahantsika azy io? Voalohany dia hofongarantsika ny Smart Object hahafahana miasa ao aminy.
Mba hamahana ity olana voalaza ity dia manana fomba roa isika:
Safidy A: Mamorona kopian'ny sosona sary
Apetrakay eo amin'ilay elanelana misy eo ivelan'ny lamba ny sary. Ity sary ity dia, ohatra, ao amin'ny Layer 1.
Izahay dia manao dika mitovy ny sosona 1. Noho izany dia hofidianay izy io ary hotaritarinay mankany amin'ny kisary ambany Sosona avo roa heny, mamorona ny Layer 1 kopia.
Misafidiana kopia Layer 1 izao, tsindrio Fanaraha-maso + A.
Mandritra ny voalaza ao anaty sosona dia manindry izahay esory.
Izao dia tsindrio ny sary eo ivelan'ny lamba ary tsy hitanay, ary notaritarinay nankany amin'ny ilany mifanohitra amin'ny lamba. Zava-dehibe ny afovoany amin'ny haavony mitovy, ka, rehefa mametaka ny rapport amin'ny sisiny, dia mijanona ho afovoany. Noho izany dia manindry izahay fanovana amin'ny fotoana itondrantsika azy io.
Mba hahafahana manao izany rehetra izany, ny boaty ambony an'ny Safidy mandeha ho azy.
Safidy B: fampiasana koordinatiora
Miaraka amin'ny sosona voaangona (natambatra ireo sosona hita maso teo aloha), dia manamboatra ny haben'ny sary izahay mba hametrahana iray izay mora kokoa amin'ny fitantananay. Ohatra 5000 x 5000 px. Izao no ametrahantsika: Sary> Haben'ny sary.
Tsindrio izao Sivana> Hafa> Offset> 2500 mitsivalana 2500 mitsangana> Atsimbadika. Amin'izany no ahafahantsika mameno ny banga amin'ny sary bebe kokoa.
Fitaovam-piadiana ny lamina
Raha vantany vao fenoina ny banga rehetra ao amin'ny singa fototra, dia hanohy hanamboatra ny lamina isika. Hanaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Atambatra ireo sosona hita maso ny rapport izay noforoninay ary novainay Zavatra Inteligent.
Mamorona antontan-taratasy vaovao izahay ny habe tadiavintsika (raha jerena ny zavatra hanonta ny maodelintsika).
Safidintsika daholo ny fifandraisanay. Manova> Mandika.
Manova> Mametaka ao amin'ny antontan-taratasy vaovao.
Manitsy ny haben'ny rapport izahay.
Raha manana ny haben'ny rapport ary mamerina azy dia averinay. Mba hanaovana izany dia safidintsika ny sosony ary sintomintsika midina izy io, ho Sosona avo roa heny. Ary efa nangoninay ny maodelintsika.
Amin'ity tranga ity dia nanao maodely tamin'ny endrika kofehy izahay, izay ny tsotra indrindra, saingy misy endrika marobe.
Karazana lamina mifanaraka amin'ny endriny
Amin'ny endrika Grid.
Amin'ny endrika ladrillo.
Miaraka amin'ny sary superposition.
Simple (misy banga maro).
Complex (tena haingo).
Makroskopika (miaraka amin'ny sary lehibe).
Amin'ny endrika mpankafy.
Tsy misy tongotra. Amin'ity lamina ity dia tsy misy tongotra ny sary, izany hoe raha solointsika izy dia mandeha tsara ihany koa. Ny fampiasana azy dia ahafahantsika fa, ohatra amin'ny famolavolana lamba, dia toa tsara ny zaitra, na inona na inona ataontsika modely. Sarotra kokoa ny mametaka ny seams amin'ny lamina tongotra, izay tsy maintsy afovoany tsara ny sary.
Inona no andrasanao hamela ny eritreritrao hivezivezy mamorona lamina tsara tarehy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba hamoronana lamina amin'ny Photoshop